Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Md Eugène » St. Eustatius no trano misy ny planeta voalohany any Karaiba
Tetikasa fanabeazana notarihin'i Jaap Vreling sy Andriamatoa Ishmael Berkel ity. Jaap dia mampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Amsterdam ary anisan'ny vondrona mpikaroka momba ny astronoma holandey tamin'ny taona 2010, izay nanombohana tetikasa dome
Ny planetarium miorina ao amin'ny Lynch Plantation dia manintona mpizahatany fanampiny ao St. Eustatius
Ny dome planetarium St. Eustatius dia afaka mandray mpitsidika 25 indray mandeha
Amin'izao fotoana izao, tsy misy sarany ny fidirana ao amin'ny planeta St. Eustatius satria mbola eo amin'ny sehatra mpanamory fiaramanidina izy io, na izany aza, nanambara ireo mpamorona fa mety ho voaloa ny saram-pidirana
Misy vitsivitsy monja amin'ny karazany eto amin'izao tontolo izao, ary araka ny voalazan'i Jaap Vreling, tsy mihoatra ny dimy, ary ankehitriny i St. Eustatius (Statia) no tranon'ny planetarium voalohany any Karaiba.
Tetikasa fanabeazana notarihin'i Jaap Vreling sy Andriamatoa Ishmael Berkel ity. Jaap dia mampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Amsterdam ary anisan'ny vondrona mpikaroka momba ny astronoma holandey tamin'ny taona 2010, izay nanombohana tetikasa dome. Miaraka amin'ny ekipan'ny mpianatra astronomia eny amin'ny anjerimanontolo 14, dia nitety domes 3 nankany amin'ny sekoly nanerana an'i Netherlands izy, nampiranty, ary indraindray nampidirina ho astronomia tamina fandaharam-pianarana, satria ny fisian'ny planetarium eo an-toerana no fitaovana lehibe manampy amin'ny fampianarana momba an'io lohahevitra io.
Nandritra ny taona maromaro dia nanonofinofy i Jaap fa ho afaka hitondra planeta any Statia. Ilay Ishmael Berkel an'ny nosy ihany koa dia nitahiry io nofy io, ary dinika maro no natao teo amin'izy roa tonta mba hamaritana ny fomba hanatanterahana azy. Samy mankasitraka ny lanjan'izy ireo amin'ny fanabeazana izy ireo, amin'ny fanekena fa rehefa mitsidika planeta planetaly ny mpianatra dia miala am-po liana amin'ny fianarana. Any amin'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao, ny fahalotoan'ny hazavana dia tsy ahafahanao mankafy ny lanitra amin'ny alina. Tsy nanana famerana toy izany i Statia fa talohan'izao dia mbola tsy nisy fanazavana mora azo momba ny zavatra voamarika. Ny fomba milky, kintana, planeta, ny volana, ny fifandraisan'izy rehetra, ny fomba nampiasan'ny razana azy hitety ny toerana sy ny toerana hafa ary ny lafiny fampiharana hafa eo amin'izao rehetra izao dia azo ampianarina ao anatin'ny tontolo planetarium mahavariana ao Statia. Ny fitsidihan'ny planeta dia voaporofo fa mahasoa ho an'ny mpianatra amin'ny sokajin-taona rehetra, hatramin'ny fahazazany. Tsy ny mpianatra ihany anefa no mahazo tombony. Izy io dia traikefa azon'ny rehetra ankasitrahana.
Ny planetarium dia mpizaha tany fanampiny ao amin'ilay nosy. Any amin'ny Lynch Plantation no misy ny dome afaka mandray olona 25 indray mandeha. Fitaovana rindrambaiko farany indrindra amin'ity orinasa ity, ny vahiny dia ho voasaron'ireo fiasa amin'ny teatra famoahana azy, izay miteraka traikefa azo antoka rehefa mandehandeha erak'izao rehetra izao izy ireo.
Ny fanokafana tamim-pomba ofisialy dia natao tamin'ny 23 Febroary 2021 niaraka tamina vondron'olona nasaina vitsivitsy nanatrika. Tongasoa ny besinimaro hitsidika ny 24, 25, 26 febroary manomboka amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 12:00 hariva. Amin'izao fotoana izao, tsy misy sarany ny fidirana satria mbola eo amin'ny dingana pilotany, na izany aza, nanondro ireo mpandraharaha fa mety hampandoavina sarany ny fidirana amin'ny farany.
"Mamiratra ny ho avy," hoy Andriamatoa Berkel, "ary eto izahay mba hahazoana antoka fa ny Statians rehetra, na lehibe na kely, dia manana fotoana hankafizana izany. Izahay koa mahita fa ireo mpizahatany mitsidika ny nosy dia afaka hanana an'io fisarihana io hanampiana ny traikefa vakansy. ”